एसएसपी दिवेश लोहानी लगायत प्ररीका ७ जना अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एसएसपी दिवेश लोहानी लगायत प्ररीका ७ जना अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता
डिसी नेपाल , १९ बैशाख २०७५
विराटनगर । राप्रपा नेता भुजुङ गुरुङ, पूर्वडीआईजी गोविन्द निरौला, एसपी विकासराज खनाल लगायत बुधबार ६३ जना बिरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
३३ केजी सुन प्रकरण र सनम शाक्य हत्या अभियोगकोमा ६३ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत, मोरङमा मुद्दा दर्ता गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका ७ प्रहरी अधिकारीसहित अन्य २८ जना र अन्यलाई फरार अभियुक्त बनाएर मुद्दा दर्ता भएको हो । अदालतका श्रेस्तेदार नवराज दुलालले अपहरण, कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराध अन्र्तगत मुद्दा दर्ता गरिएको पुष्टि गरेका छन ।
मोहन कार्की, एकराज मल्ल, नरेन्द्र कार्की, लाक्पा शेर्पा, माधव भन्ने मोहन घिमिरेलाई कर्तव्य ज्यान र संगठित अपराध मुद्दा चलाइएको छ । सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे भने अझै फरार छन् । उनी भारतमा लुकेर बसेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
मुख्य अभियुक्त उप्रेतीलाई सङ्गठित अपराध तथा अपहरण गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गर्नेछ भने अन्य पक्राउ परेका २८ जनालाई छुट्टाछुटै मुद्दा दर्ता गर्नेछ । बहालवाला र पूर्व गरी ६ प्रहरी अधिकारी, तीन व्यापारी, सनम शाक्य हत्यामा जोडिएका ६ प्रतिवादी र विमानस्थलमा कार्यरत १३ प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउन लागिएको हो ।
गत फागुन १८ गते सुन तस्करको समूहले भरिया सनम शाक्यको मोरङको उर्लाबारीमा हत्या गरेको थियो ।